Matahay Qof Jecel Wax Aqrinta? |
10 Kun Oo Ciidanka Ruushka Oo Xasuuqa Ka Gaystay Suuriya Oo Bilado La Siiyey ITukesomalism.com
Ilhaan Ciise Maxamed — February 23, 2019
Intabadan waxa ay yiraahdaan Soomaalida waa dad aan wax aqrin, waa bulsho hadal, aqriskuna uu kafogyahay laakiin waxaan ogahay aniga in ey aan leennahay kuwa badan oo aqriska aad ujecel oo aad adigaan hadda aqrinaya aad kamid tahay. Sow sax maahan oo majeclid aqriska? Dabcan “Haa”.
Hadaba Kaalay Aan Isla aragnee Hannaanka Ugu Wanaagsan Ee aan Wax Badan Oo Maskaxdeenna Kuhara ku aqrin karno:
Marka hore dooro wax aad kuqanacsantahay aqrintooda oo aad jeceshahay: Isweydii waxa aad jeceshahay in aad aqrido? Mawaxaad jeceshahay in aad aqrido sheekooyinka aan xaqiiqiga ahayn mise kuwa jiraalka ah- xaqiiqiga ah, Mawaxa aad jeceshahay in aad taariiqda iyo sooyaalka aad aqrido, mise waxa aad jeceshahay in aad aqrido sheekooyinka laxiriira jacaylka, siyaasadda, waa kuwee isweydii bal waxa aad jeceshahay in aad aqrido oo aad farxad ku agdareemeyso ama Latasha asxaabtaada ama saaxiibkaaga kuugu dhaw oo dabeecadahaaga gaarka ah yaqaan.
Dooror meel xaddidan oo aad wax ku aqrido: sida maktabadaha yaryarka ah –IFIYE waa maktabad ku habboon aqrinta oo aan inbadan wax ku aqristay waxa eyna kutaal caasimadda dalka ee Muqdisho- meeshaan xaddidan waxa ey kaasaacideysaa in aad kujirto bii’ad wax aqris oo maskaxdaada ey kabaxayaan waxyaabaha kale oo mashquulin lahaa, waxa aadna awoodeysaa in aad dhammeyso qaddarki aad ugu talagashay in aad aqrido.
Qaado warqad si’aad udhigaashato qodobada ugu muhiimsan ee buugga ama qoraalka aad aqrineyso: waxaa hubaal ah in aad ku dhax arki doontid qodobo ku cajabgaliyo oo aad ubbaahantahay in aad dhigaal “note” ahaan aad uqaadato. Sababta oo ah qoraalka aad mar aqrisaa maskaxda kumwada haro laakiin waxa aad heysataa fursad ah in aad wax uun kadhigaashan karto.
Ha’aqrin qoraal aad udheer iyo waqti xaddidan: haddii aad kucusubtahay aqrinta naftaada haku qasbin in ey aqriso qoraal aad udheer ama aad ubadan oo eysan awoodin sababta oo ah waxaa kugu dhici kara in aadba nacdo aqrinta marki aad soo xasuusato qoraalkii dheeraa ee aad kuqasabtay aqrintiisa. Waxaa kuu wanaagsan in aad naftaada leyliso sitartiib tartiib ah iyada ayaaba siddaggan ulaqabsandoonto una jeclaan doonto aqrinta. Muhiimaddu waa in aadan maskaxdaada ku saarin cadaadis shaqo eysan qaban Karin.
Inta aad aqrinta waddo qaado nafis yar: marki aad ugu talagasho in aad soddon daqiiqo oo kaamil ah aad aqrido ugu yaraan dhaxgasho shan daqiiqo oo nafis ah, oo aad shaah ama doolshe wax uun aad afka kudhufankarto ujeedkuna waa in maskaxda daalka laga ilaalsho lana siiyo tamar iyo enerji ey wax ku sii aqrin karto.
Gunaanad: marki aad aqrintaada dhammeyso waxaa muhiim ah in aad qoroto meesha aad ku ekeeysay aqrinta, iyo waqtiga aad dib u aqrin doontid, si maskaxda eysan hilmaan uga noqan aqrintaas socotay.
F.G: waxaa ila muhiimsan in aadan wax u aqrin waala aqriyaa ee aqri. Waxaan kugu darsan lahaa aad wax kafaa’iidid uun u aqri.
Tags: Matahay Qof Jecel Wax Aqrinta?
Next post Falanqaynta Gabaygii Cirir
Previous post Waa Maxay Ibidda Cunnuga?